Japan saamiyada Display keeno Stamford Bridge on ugu horeysay ee Tokyo - Rule News
Japan saamiyada Display keeno Stamford Bridge on ugu horeysay ee Tokyo
iPad Air (credit Photo: John.Karakatsanis)
Saamiyada Display Japan — gaare ee aduunka ugu weyn ee screens casriga ah iyo kiniiniyada iyo alaab-muhiimka ah Apple — muquurtay ay Tokyo ugu horeysay ee Arbacadii, ka dib markii a $3.2 bilyan oo qurbaan dadweynaha bilowga ah.
stock The, taas oo ka mid ah wareega badiyay in ka badan shan meelood meel of miraheeda, dhammaadkeedu 763 yen, a 15.2 boqolkiiba dhibic ka 900 yen qiimaha liiska, iyadoo mid ka mid ah falanqeeye ku tilmaamay khasaare ah sida a “musiibada”.
index benchmark stock Nikkei ayaa ku dhameysatay 0.36 boqolkiiba sare.
The crystal bandhigay gaare dareere todobaadkii hore jaban ay qurbaan dadweynaha bilowga dhamaadka hoose ee la filayo, talinaya in maal ahaayeen ka walwalsan ah oo ku saabsan iibinta, laakiin waxa uu sheegay in dalabka ahaa xoog.
Japan Display heysta hoggaamineed a 16 boqolkiiba koraya ee $35 billion suuqa caalamka ee casriga ah iyo kiniin screens, sida laga soo xigtay shirkadda cilmi ku salaysan US NPD Group.
Oo ay soo xaroota ahaa mid ka mid ah ugu weyn ee Tokyo tan iyo unit cunto-iyo-sharaabka cabitaanka Rafaa Suntory ayaa soo sara kiciyey $3.9 bilyan 2013.
Si kastaba ha ahaatee, Falanqeeyayaasha ayaa ka digay waxa tartan adag ka yimi dalalka qiimaha hoose-, ay ka mid yihiin Shiinaha, South Korea iyo Taiwan. Si taas looga qabto, shirkadda — qotomiyey 2012 iyada oo ku biirto ee Hitachi, Toshiba iyo Sony ee unugyada LCD khasaaraha qaadashada — ayaa doonaya in uu sii kordhiyo wax soo saarka ee screens yar oo dhexdhexaad ah.
Laakiin Seiichi Suzuki, falanqeeye suuqa at Tokai Tokyo Securities, sheegay AFP: “Tani waa shirkad la sameeyey ilaa cutubyo iibinayo by shirkadaha waalidka ay. (Waxa aanu) leedahay mustaqbal ifaya.”
Waxa uu sheegay in shirkadda ay tahay in ay haysan “lagu qasbay in ay liiska”, xiganaya jawi adag suuqa la index Nikkei hoos ku xeeran 10 boqolkiiba sanadkan.
– 'Aad iyo niyad jab’ –
Japan Display hore ayaa sheegay in ay iibin doonto 140 million oo ah saamiyada cusub ee u dhexeeya 900 yen iyo 1,100 yen, halka saamileyda gaarka ah ay waaweyn iibiso lahaa 213.9 million oo ah saamiyada.
“musiibada A, ma shaki,” Lorne Steinberg, oo ah madaxa maamulka Lorne Steinberg Wealth-ku-saleysan Montreal, sheegay Dow Jones Newswires.
“Heshiiska waa in sidoo kale si xun mispriced ama saldhig Maal la kadaba. In North America, ganacsada si joogta ah u taageeraan Saraakiisha booliska, si noocan ah qaab furitaanka dhici kartaa oo keliya haddii suuqa oo dhan ayaa sidoo kale si lama filaan ah u socday xun waqti isku mid ah.”
Chris McGuire, maamulka sare ee Maamulka Phalanx Capital fund deyr ku salaysan Chicago, tuuray saamiyada oo dhan uu mar hore soo iibsaday adag ee furan.
“The yaacday qiimaha ay ku dhacaan waa mid aad u niyad jab iyo muujinaysaa in heshiis la duldhigay at arrinta,” ayuu yiri.
Apple xisaabay in ku dhawaad ​​saddex meelood dakhliga Display ee Japan, balse shirkadda ayaa sidoo kale ka hadlaya kuwa kale ee qalab top sida Samsung iyo Microsoft.
Shirkadda waxaa la sameeyay iyada oo ujeedadu of caawinta shirkadaha Japan fiican tartamaan-xalinta sare technology bandhigay, taas oo uu noqday caadiga ah ee casriga ah, kiniin iyo qalab kale oo elektaroonik ah.
Innovation Network Corp ayaa dowladda KMG ah ee Japan qabtay oo ku saabsan a 70 boqolkiiba share of shirkadda, iyadoo saddexda kooxda korantada kasta sheeganaya qiyaastii a 10 boqolkiiba saamiga.
Kooxda badan oo korontada iyo technology Japanese ayaa ku dhibtooday sannadihii la soo dhaafay sida ay u wajihi yareeyaan qiimaha ay xafiiltamaan ee shisheeye iyo khasaare daran in qaar ka mid ah unugyada alaabta macaamiisha, oo ay ku jiraan telefishannada meesha xadad faa'iido yihiin xabbad canjeero-khafiif ah.
shirkadaha Mar-xoog badan sida Sony iyo Panasonic ayaa qaliin Manhajkooda xanuun badan ka dib markii sano ee khasaaraha.
Sony bishan ayaa sheegay in ay iska iibiso lahaa guryaha at a site Tokyo qiimaha halkaas oo lahaa xarunta muddo lix sano ee, sida shirkadda hore dunida ku garaaceen hardan adag in la dayactiro ay line hoose.
article Tani, Japan saamiyada Display keeno Stamford Bridge on ugu horeysay ee Tokyo, waxaa syndicated ka AFP oo waxaa halkan fasax posted. Copyright 2014 AFP. All Rights Reserved
25622	0 Apple, Chicago, IPad, Japan, Japan Display, Seiichi Suzuki, Sony, Tokyo
← weerar Heart misdiagnosed sida walaaca dumarka 'Chicken ka jahannamada’ toosh cusub oo ku saabsan xayawaan qiroweyn shimbir-sida →